Buug-gacmeedka xubin - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Kheyraadka Xubinta > Qorshahaaga iyo Daboolidaada > Buug-gacmeed Xubin
Hagahaaga qoto-dheer ee dheefaha iyo adeegyada la daboolay
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) waxa uu rabaa in uu awood kuu siiyo in aad samayso go'aamo daryeel caafimaad oo adiga kugu habboon. Si uu kaaga caawiyo inaad gaadho go'aamadaas, buug-gacmeedka faa'iidooyinka xubinta CHPW ayaa faahfaahinaya caymiska iyo faa'iidooyinka ku jira qorshahaaga.
Hoos ka soo deji buug-gacmeedkaaga si aad u hesho faahfaahin ku saabsan:
Faa'iidooyinka iyo adeegyada caymiskaaga waxaa ka mid ah
Sidee loo helaa daaweyn
Sida loo helo ama loo beddelo bixiyeyaasha
Sida aan u ilaalino macluumaadkaaga gaarka ah
Xuquuqdaada xubin ahaan CHPW
Waxa la sameeyo haddii si xaq darro ah laguula dhaqmo
Macluumaadka xiriirka muhiimka ah ee hay'adaha daryeelka caafimaadka ee Washington
Buug-gacmeedka Faa'iidooyinka Xubinta
Buug-gacmeedka Caafimaadka Apple
Soo deji buugga faa'iidooyinka xubinta Apple Health ee PDF:
Ingiriisi (Foot weyn)
Español - Isbaanish
中文 – Shiinees
Pусский - Ruush
Tiếng Việt - Fiyatnaamiis
العربية - Carabi
Buug-gacmeedka Adeegga Caafimaadka Dhaqanka oo Keliya (BHSO).
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qorshahaaga ama faa'iidooyinka BHSO, soo deji Buug-gacmeedka Xubinta BHSO, oo laga heli karo:
Si aad u codsato buug-gacmeedka koobiga adag ee bilaashka ah, fadlan ka wac Adeegga Macmiilka at 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711), laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha. Waxaan kuu soo diri doonaa nuqul 5 maalmood oo shaqo gudahood markii aad codsato.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Abriil 27, 2022